ဘာကြောင့် FEELTEK - FEELTEK Laser Technology Co., Ltd.
Dynamic Focus System အကြောင်း
2D Scanhead အမှတ်စဉ်
3D Scanhead စီးရီး
100% Temperature drift detection
လုပ်ငန်းစဉ်အပြည့်ဖြင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ အပူချိန်ပျံ့ကျမှုကို စောင့်ကြည့်ခြင်း။
အချက်အလက်အစစ်အမှန် အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်ပါ။
ယာဉ်မောင်းနှင့် မော်တာအာရုံခံကိရိယာ၏ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် FEELTEK သည် တိကျသောမျက်နှာပြင်လုပ်ဆောင်မှုကို အာမခံရန်အတွက် ကောင်းမွန်သောတည်နေရာပြတိကျမှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ယာဉ်မောင်းနှင့် မော်တာအာရုံခံကိရိယာ၏ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အသံချဲ့စက်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပျံ့လွင့်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်စေသည်။
မော်တာအမြန်နှုန်းနှင့် အရှိန်မြှင့်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်သည် ထောင့်တိကျမှုနှင့် အရှိန်လွန်ခြင်းအတွက် အာမခံချက်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် တိကျစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် ဝင်ခွင့်စံနှုန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည် (မြန်နှုန်းမြင့်ဖြည့်သွင်းခြင်း၊ etching.etc)
တူညီသောအမြန်နှုန်းနှင့် တိကျသေချာသော XY ကို ဖြတ်သန်းပါ။
ဖြည့်သွင်းမှု တိကျမှုနှင့် မိုက်ခရို-ပရိုဆက်ဆာ roundness ကို သေချာပါစေ။
ကောင်းကင်တမန်ဖြည့်ခြင်းနှင့် မျဉ်းဖြောင့်ခြင်း၏ ကန့်သတ်ချက်ကို မြှင့်တင်ပါ။
Z Axis ချိန်ညှိမှု
မြင့်မားသောတိကျသောအနေအထားအာရုံခံကိရိယာညှိခြင်းပလပ်ဖောင်းမှတစ်ဆင့်၊ FEELTEK သည် ရွေ့လျားဝင်ရိုး၏တစ်ဖြောင့်တည်းဖြစ်သော၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့် အပူချိန်ပျံ့လွင့်မှုဒေတာရလဒ်များကို မြင်နိုင်သည်။အရည်အသွေး အာမခံပါသည်။
●ချိန်ညှိခြင်းပစ်မှတ်- တည်နေရာတိကျမှု၊ အပူချိန်ပျံ့ကျမှုနှင့် Z ဝင်ရိုး၏မျဉ်းဖြောင့်။
●ချိန်ညှိကိရိယာ- SICK (C30T05)။
●ချိန်ညှိကိရိယာ အညွှန်းများ- အကွာအဝေး- 30mm၊ တိကျမှု- 0.3μm၊ နမူနာကြားကာလ- 12.5μs။
linearity- 99. 5%@3°
အပူချိန်ပျံ့ခြင်း- ≤4 μm@4 နာရီ
ကြည်လင်ပြတ်သားမှု- ≤1.2 μm
ကျွန်ုပ်တို့သည် 3D လေဆာအမှတ်အသားပြုခြင်း၊ ထွင်းထုခြင်း၊ လေဆာဂဟေဆော်ခြင်း၊ တူးဖော်ခြင်း၊ အပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မျက်နှာပြင်ကုသမှုနှင့် အခြားလေဆာလုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းနည်းများကဲ့သို့သော အများအပြား 3D လေဆာလုပ်ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် နည်းပညာကို ထုတ်လွှတ်ပါသည်။
Building I၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစင်တာ၊ Zhangjiagang လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဇုန်၊ Suzhou City၊ Jiangsu ပြည်နယ်၏ 3F-5F
© မူပိုင်ခွင့် 20102021 : FEELTEK Laser Technology Co. Ltd. All Rights Reserved.